नेपाल बन्दको दिन बिहानै पोखरामा शक्तिशाली बिस्फोट, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
नेपाल बन्दको दिन बिहानै पोखरामा शक्तिशाली बिस्फोट, केछ अवस्था ?
काठमाडौँ । संसद बाट एमसीसी अनुमोदन भएसंगै देशभर चर्को बिरोध सुरु भएको छ । एमसीसी संसदमा टेबुल हुनुपूर्व नै व्यापक बिरोध प्रदर्शन भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसी पास गरेरै छोड्यो ।
आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदन भएसंगै बन्द बिरोधी गठबन्धनले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दका कारण देशभरको जनजीवन ठप्प छ । बन्दको दिन बिहानै पोखरामा शक्तिशाली बिस्फोट भएको छ ।
लेखनाथमा बिहान ६ बजेर ५५ मिनेटतिर बिस्फोट जस्तो चर्को आवाज आएको स्थानीयले संचारकेन्द्रलाई बताए । यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बन्दको असर काठमाडौँमा पनि परेको छ । बिहानी सेवाका स्कुल कलेज बन्द छन् । लामो दुरीका यातायात चलेका छैनन् ।
एमसीसी बिरोधि गठबन्धको आइतबार अपरान्ह बसेको बैठकले आज नेपाल बन्द आव्हान गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले संचारकेन्द्रलाई बताए ।
बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका क्रान्तिकारी, देशभक्त, प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत, विरोध र देशव्यापी जनसङ्घर्ष गर्दागर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्ने मूर्खता गरिरहेको र यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले १६ गतेका लागि सशक्त नेपाल बन्द घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज ६ कम्युनिस्ट पार्टी र २ वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौँमा बस्यो । नेपालका क्रान्तिकारी, देशभक्त, प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत, विरोध र देशव्यापी जनसङ्घर्ष गर्दागर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्ने मूर्खता गरिरहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा यस्तो राष्ट्रघातका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पूरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ ।
‘यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी ६ कम्युनिस्ट पार्टी र २ मोर्चाले तत्कालिक जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । यसलाई पूरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं । साथै आज एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योद्धाहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।